Umthandazo kuSanta Muerte ukuze lowo umthandayo abuye. ? Unamandla
Umthandazo kuSanta Muerte wokuba othandekayo abuyele. Uya kuba nakho ukufumana iimpendulo ezininzi izicelo zakho malunga nothando.
Lowo uthandekayo ongakugqibi ukungena ebomini bakho okanye ongakhange awele umendo wakho unokufumana isikhokelo soKufa okungcwele ukuza okanye ukukufumana ebomini bakhe.
Kwezo meko apho uthando lwethu sivakalelwa ngumntu alubuyiswa kuxa sifuna uncedo esilufumana kulo mthandazo unamandla ngendlela efanelekileyo, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Ungakholelwa, lo mthandazo unamandla kakhulu. Thandaza ngokholo olukhulu kunye namandla akho!
1 Nguwuphi uMthandazo oya kuSanta Muerte wokubuya kwesithandwa?
2 Umthandazo kuSanta Muerte wokubuyisela othandekayo
3 Ngaba lo mthandazo unamandla?
4 Icebiso: Umthandazo kuSanta Muerte ukubuyisela othandekayo
Yintoni u-O ngayoIsabelo kuSanta Muerte ukuze othandekayo abuyele?
Imithandazo iyakhonzwa ngayo yonke into oyifunayo, isicelo sisenokuba asisiyo ngokwasemzimbeni njengokuphiliswa okanye ubutyebi kodwa kunokuba yinto yokomoya ukufikelela kuxolo lwangaphakathi.
Kule meko umthandazo ngow fumana uthando okanye ukuze asifumane, into ebalulekileyo kukwazi ukuba umthandazo unokwenza yonke into.
Lo mthandazo kuSanta Muerte kukholelwa ukuba waqala kwisizwe sama-Aztec eMexico, nangona kunjalo kuyaziwa ukuba ukuza kuthi ga ngoku samkelwa ngenxa yamandla nokusebenza kwawo.
Umthandazo kuSanta Muerte wokubuyisela othandekayo
USanta Muerte, umhlobo wabafazi kunye nabasetyhini ababandezeleka, ndiguqa ezinyaweni zakho ukukuxelela usizi lwam.
Ndikhangela kuwe ukuba undincede ndoyise iingxaki zam zothando.
Ukudakumba nokungasizi kuthatha phezu kwam.
Ndicela umamele isicelo sam, iimvakalelo zam zinyulu kwaye zinyanisekile kumntu endimthandayo.
Ndibuhlungu yile meko kwaye ndifuna uncedo phantsi kwengubo yakho engcwele.
Fumana la magama njengophawu lwento eyenzekayo entliziyweni yam.
Umphefumlo wam uyalila ngenxa yokungabikho (khankanya igama lakhe) kwaye ndiyakucela ngamandla am onke ukuba undizise ecaleni kwam.
Ndiyazi ukuba uyayiva imithandazo yam ngenxa yokuba ivela ezinzulwini zomphefumlo wam, ndiyazi ukuba uza kundinceda.
Ndiyanibulela njengoko nithanda kakhulu ukubulela, ndininika yonke intlonipho nobungangamsha.
Ndiyakuthembisa (wenza isithembiso) Ndiya kuyifeza ngaphandle kokuthandabuza.
Ndishiya iingxaki zam zisezandleni zakho, kuba ndithembele ngokupheleleyo kumandla akho, kummangaliso nakulungileyo uSanta.
ISanta Muerte eyalelwe oku umthandazo Icacile ngokukodwa yiSanta Muerte Roja, imbonakalo yayo ibonakaliswa kunye nengubo enemibala yeeruby.
Unokwenziwa izicelo ezinento yokwenza neemvakalelo, uthando, ubudlelwane kunye neemvakalelo.
Kukho abo bancomela ukwenza isibingelelo esikhanyisiweyo kunye neminye iminikelo enokuba ziziqhamo, iintyatyambo, iilekese okanye utywala.
Umthandazo oya kuSanta Muerte wokubuyisa othandekayo kufuneka wenziwe phambi kwesi sibingelelo kangangeentsuku ezisixhenxe kwaye ekupheleni kweli xesha lixesha lokuba ulinde ummangaliso ukuba wenzeke.
Ngaba lo mthandazo unamandla?
Impendulo ngokungathandabuzekiyo iyakhokelela ekubeni, kuyo yonke le minyaka, ubungqina bamakholwa abeze kuwo kwaye bafumana uncedo sele lwaziwa.
Ukongeza, yonke imithandazo eyenziwa kunye nokholo inamandla.
Unamandla amakhulu. Kufuneka nje sibe nokholo.
Icebiso: Umthandazo kuSanta Muerte ukubuyisela othandekayo
Ndifuna ukunika ingcebiso elula yokwenza umthandazo ube namandla.
Khanyisa amakhandlela abomvu asixhenxe ngaphambi komfanekiso weSanta Muerte. Ukuba uyaphumelela, khanyisa amakhandlela phambi komfanekiso woKufa okungcwele.
Mnike amakhandlela. Amakhandlela sisipho sokubulela.
Ndiyakwazi Yenza isithembiso sakho ngeli siko. Ungathembisa ngokukhanyisa amakhandlela ngakumbi okanye wenze olunye uhlobo lokunikezela.
Ngale ndlela umthandazo wakho uya kusebenza ngokukhawuleza. Lonke uncedo oluyimfuneko luya kufumaneka ngendlela elula neyomeleleyo.
Ukuba ufuna ukuba nomntu omthandayo abuye, kufuneka uthandaze lo mthandazo u-Ngcwele.